सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, नयाँ भाडा कति? - Everest Dainik - News from Nepal
सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, नयाँ भाडा कति?
काठमाडौं, जेठ ३० । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । यातायातको भाडा अधिकतम् १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थदेखि अन्य सबै कुराको अध्ययन गरेर वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गरिएको हो’, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले भने, ‘लामो छोटो रुट हेरेर १० देखि १२ प्रतिशको बीचमा भाडा वृद्धि भएको छ।’ २०६९ सालदेखि सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि भएको थिए। करिब ७ वर्षपछि सरकारले भाडा बढाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस देशभर चिसो बढ्यो, काठमाडौंको तापक्रम शून्य दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस
ट्याग्स: ktm, Vada